. ခေါင်းမှာရေအိတ်တည်နေတဲ့ (၁၀)လအရွယ်သားလေးအတွက် အလှူငွေတွေရရှိပြီးမှ မခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့ ဝေဠုကျော်. – Askstyle
. ခေါင်းမှာရေအိတ်တည်နေတဲ့ (၁၀)လအရွယ်သားလေးအတွက် အလှူငွေတွေရရှိပြီးမှ မခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောလာတဲ့ ဝေဠုကျော်.
ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ပဲ ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ အကူအညီလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ စိတ္ေရာလူပါ ပါဝင္ျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ပရဟိတမင္းသားၾကီး ေဝဠဳေက်ာ္ကေတာ့ အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရေနရင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ပရဟိတအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေဝဠဳေက်ာ္က ဘဝေပးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေရာဂါေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနရသူေတြကိုလည္း (၇) ရက္သားသမီးအလွဴရွင္ေတြနဲ့ ခြဲစိတ္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာေတာ့ ေဝဠဳေက်ာ္က ေခါင္းမွာေရအိတ္တည္ေနတဲ့ (၁၀)လအရြယ္သားေလးအတြက္ အလွဴေငြေတြရရိွျပီးမွ မခြဲစိတ္ေတာ့မယ့္အေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာေျပာလာပါတယ္။
ေဝဠဳေက်ာ္က “ကရင္ျပည္နယ္၊လႈိင္းဘြဲ႕က ၁၀လ အ႐ြယ္ ေခါင္းေရအိတ္တည္ေရာဂါ သားေလးပါ။ မနက္က ၾကာသပေတးေန႔ ခြဲစိတ္ဖို႔အတြက္ ရန္ကင္းေဆး႐ုံမွာ သြားစစ္ေဆးရပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကားနဲ႔ပဲ လိုက္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ေဆး႐ုံက ေဆးစစ္ခ်က္ေတြအရ ကေလးဦးေႏွာက္က ေရပိတဲ့ဒါဏ္ေၾကာင့္ ျပားခ်ပ္ေနၿပီး ပြန္းပဲ့ ဒါဏ္ရာရေနပါၿပီ။ ခြဲစိတ္ရင္လဲ ေခါင္းခြံက ျပန္မပိန္ႏိူင္ေတာ့ သလို ေရထုတ္ၿပီးရင္လည္း ဦးေႏွာက္ ေသးၿပီး ျပားခ်ပ္ေနလို႔ ရွင္သန္ဖို႔မလြယ္ႏိူင္ေတာ့ပါဖူး။ အခုခြဲစိတ္ဖို႔ကိုလည္း ေမ့ေဆးဒဏ္ခံႏိူင္ဖို႔နဲ႔ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔က ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိတယ္ဆိုတယ့္အေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိရပါတယ္။”
“ဆရာဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈအရ ႏိူင္ငံျခားေရာက္ေနတယ့္ သားေလးမိဘေတြက သားေလးကို မခြဲစိတ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္က်ျခင္း၊ေစာျခင္းေတြမေျပာလိုေတာ့ပဘူး။ အရာအားလုံးဟာ သားေလးရဲ႕ကံတရားျဖစ္လို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ဝဋ္ေႂကြးေတြ မ်ားခဲ့ပုံရပါတယ္။ သားေလးအတြက္ အလႉရရွိထားသည္မ်ားကို သားေလးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တခ်ိဳ႕ လႉေပးၿပီး က်န္ရွိသည့္ အလႉေငြမ်ားကို သားေလး ကုသိုလ္ရသြားေအာင္ အျခား လိုအပ္ေနၿပီး အလႉမရသည့္ ကေလးလူနာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း လႉဒါန္းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလႉရွင္မ်ားအား အသိေပးအပ္ပါသည္။ သားေလး ေဆး႐ုံကျပန္ဆင္းသည့္အခါ စာရင္းရွင္းတမ္း တင္ေပးပါမယ္။” ဆိုျပီး စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဝဠဳေက်ာ္ကေတာ့ သားေလးအတြက္ ခြဲစိတ္ကုသနိုင္ဖို့ အလွဴေငြေတြကိုလည္း ေကာက္ခံျပီး သူကိုယ္တုိင္ ေဆးရံုကိုလုိက္ပို့ေပးျပီးမွ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သားေလးလည္း ေရာက္ေလရာဘဝတိုင္းမွာ ဒီလိုေဝဒနာဆိုးၾကီးကို မခံစားရပါေစနဲ့လို့ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ အကူအညီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ စိတ်ရောလူပါ ပါဝင်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်ကတော့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရနေရင်ကို ပျော်ရွှင်နေသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပရဟိတအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်က ဘဝပေးအခြေအနေတွေကြောင့် ရောဂါဝေဒနာအမျိုးမျိုးခံစားနေရသူတွေကိုလည်း (၇) ရက်သားသမီးအလှူရှင်တွေနဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဝေဠုကျော်က ခေါင်းမှာရေအိတ်တည်နေတဲ့ (၁၀)လအရွယ်သားလေးအတွက် အလှူငွေတွေရရှိပြီးမှ မခွဲစိတ်တော့မယ့်အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောလာပါတယ်။
ဝေဠုကျော်က “ကရင်ပြည်နယ်၊လှိုင်းဘွဲ့က ၁၀လ အရွယ် ခေါင်းရေအိတ်တည်ရောဂါ သားလေးပါ။ မနက်က ကြာသပတေးနေ့ ခွဲစိတ်ဖို့အတွက် ရန်ကင်းဆေးရုံမှာ သွားစစ်ဆေးရပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းက ကားနဲ့ပဲ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံက ဆေးစစ်ချက်တွေအရ ကလေးဦးနှောက်က ရေပိတဲ့ဒါဏ်ကြောင့် ပြားချပ်နေပြီး ပွန်းပဲ့ ဒါဏ်ရာရနေပါပြီ။ ခွဲစိတ်ရင်လဲ ခေါင်းခွံက ပြန်မပိန်နိူင်တော့ သလို ရေထုတ်ပြီးရင်လည်း ဦးနှောက် သေးပြီး ပြားချပ်နေလို့ ရှင်သန်ဖို့မလွယ်နိူင်တော့ပါဖူး။ အခုခွဲစိတ်ဖို့ကိုလည်း မေ့ဆေးဒဏ်ခံနိူင်ဖို့နဲ့ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ဖို့က ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတယ့်အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါတယ်။”
“ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုအရ နိူင်ငံခြားရောက်နေတယ့် သားလေးမိဘတွေက သားလေးကို မခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ကျခြင်း၊စောခြင်းတွေမပြောလိုတော့ပဘူး။ အရာအားလုံးဟာ သားလေးရဲ့ကံတရားဖြစ်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဝဋ်ကြွေးတွေ များခဲ့ပုံရပါတယ်။ သားလေးအတွက် အလှူရရှိထားသည်များကို သားလေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တချို့ လှူပေးပြီး ကျန်ရှိသည့် အလှူငွေများကို သားလေး ကုသိုလ်ရသွားအောင် အခြား လိုအပ်နေပြီး အလှူမရသည့် ကလေးလူနာများတွင် ထည့်သွင်း လှူဒါန်းပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။ သားလေး ဆေးရုံကပြန်ဆင်းသည့်အခါ စာရင်းရှင်းတမ်း တင်ပေးပါမယ်။” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဠုကျော်ကတော့ သားလေးအတွက် ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ဖို့ အလှူငွေတွေကိုလည်း ကောက်ခံပြီး သူကိုယ်တိုင် ဆေးရုံကိုလိုက်ပို့ပေးပြီးမှ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းကြောင့် စိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သားလေးလည်း ရောက်လေရာဘဝတိုင်းမှာ ဒီလိုဝေဒနာဆိုးကြီးကို မခံစားရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။